प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : सुनुवाइ संवैधानिक इजलास कि बृहत् पूर्णमा? « Dainik Online
महान्यायाधिवक्ता खरेलकै बहसकै क्रममा न्यायाधीश सपना प्रधानले नेपालको संविधानको धारा १३७ मा मुद्दा तोक्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई भएको स्मरण गराउँदै भने, “संविधानको धारा १३७ अनुसार प्रधानन्यायाधीशले तोकेको जुनसुकै इजलासबाट मुद्दाको सुनुवाइ हुने देखिन्छ, यो बृहत्मा लैजाँदा के फरक पर्छ? पारदर्शी र न्याय गरेको देखिनुपर्ने प्रश्नसमेत छ नि?”
प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले संवैधानिक इजलासले बृहत् पूर्ण इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनको विवाद लैजान नसक्ने तर्क प्रस्तुत गरे।
“संविधान र कानूनको गम्भीर व्याख्याको प्रश्न छ, यो संविधानको विवादको व्याख्या गर्ने इजलास हो, संविधानको विवाद अन्त पठाउने यो इजलासको हैसियत छैन ।”
रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, डा.चन्द्रकान्त ज्ञवाली, दिनेश त्रिपाठी, हरि उप्रेती र रमणकुमार श्रेष्ठले बृहत् पूर्ण इजलासमै उक्त विवादको सुनुवाइ गर्नुपर्ने विषयमा बहस गरेका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने, “संसद् विघटनका यसअघिका मुद्दा कम्तीमा ११ जना न्यायाधीशको इजलासले हेरेको हो, हाम्रो सार्वभौम इजलास नै हो, कहाँबाट हेर्दा ठीक हुन्छ, त्यही हेरौँ ।” आज क्षेत्राधिकारको विवाद नसकेपछि ‘हेर्दाहेर्दैमा’ शुक्रबारका लागि तोकिएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले बृहत् पूर्ण इजलासमा उक्त विवादको सुनुवाइ गर्न माग गर्दै यही पुस २२ गते पूरक निवेदन दिनुभएको थियो।
प्रधानन्यायाधीश राणा तथा न्यायाधीश प्रधान, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ।
यसअघिको इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की रहे पनि पछि उनी बसेनन्।
अघिल्लो ओली सरकारका पालामा कानूनी सल्लाहकारका रुपमा काम गरेको भन्ने प्रश्न उठेपछि उनी इजलासबाट बाहिरिएर आजदेखि न्यायाधीश प्रधान इजलासमा तोकिएकी हुन।
संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई छ । क्षेत्रधिकारबारे विवाद शुक्रबारसम्मका लागि लम्बिएको छ।